Coinbase ijoyina Earn.com - Blockchain Izindaba
Coinbase ijoyina Earn.com
Cryptocurrency exchange Coinbase umemezele yokufuna Earn.com, Kubikwa i $ 120M.
Earn.com, omunye zokuqala imboni uxhaso engcono, futhi ebibizwa 21 Inc. ashicilela Bitcoin yezimayini ukusebenza, inikwa amandla yi-ubuchwepheshe kusuka Intel, futhi kamuva umkhankaso nonjiniyela wayo ugxile “21 Bitcoin Computer” e 2015.
I eqinile rebranded ukuba Earn.com Okthoba lokugcina zungeza abakubonayo ukuqalisa yokuxhumana okuhloswe ngaso incentivizing abasebenzisi ukuqeda imisebenzi esenana cryptocurrency imivuzo.
Leli viki Coinbase yamemezela: “Hola seyakhe ikhokhwe imeyili umkhiqizo iyona okungelinye lamabandla okuqala kakhulu esisebenzayo blockchain izicelo ukufeza traction okunenjongo. Siyoqhubeka Hola sika ibhizinisi ukugijima ngoba ekuboniseni okuningi isithembiso futhi ezingaba khona.”
Blockchain Izindaba 12 Januwari 2018
IsiShayina yokusesha Engin ...
Robotrading iyona p ...
Blockchain Izindaba 22 Januwari 2018
consum Korea ...
Thumela Previous:Ayikho yaseJalimane. 2 ukwehlukana kwamaseli izinhlelo ukwethulwa Crypto Ukuhweba App
Thumela Landelayo:Umshwalense nomdayisi Marsh isebenza nge-IBM kungxenyekazi Blockchain
May 8, 2018 ngesikhathi 5:53 PM
Blockchain Izindaba 24.07.2018